COVID-19 Inogona Kutapukira Kumwana Achirimudumbu- Vanamazvikokota - HealthTimes
July 15, 2020 July 15, 2020 Cathrine Murombedzi
VANA Chiremba veku France vazivisa ivo kuti COVID-19 inogona kutapukira kumwana achiri mudumbu. Izvi zvakazivisa mushure mekunge chikomana chakaberekwa namai vaive neCOVID-19 chakawana chirwere ichi chisati chaona zuva.
Nyaya Na Cathrine Murombedzi
Chikomana ichi chinonzi chakazvimba huropi. Izvi zvinonzi zvakaitika utachiona hwakadanhira kubva mubvuo (placenta) chichipinda kumwana. Zvinofadza ndezvekuti mwana arikuratidza kuita zvakanaka zvekuti achanaya kuve chigwindiri.
Vazvina fundo vaive vambonyeurira veruzhinji nekutapukira kweutachiona nguva apfuura, asi vaive vasina ruzivo ruzere nazvo,” munyori mukuru, Dr Daniele De Luca, vanoshandira paAntoine Beclere Hospital iri pedyo neguta guru reParis.
“Tazviona zvavapachena kuti utachiona hwe COVID-19 hunogona kutapukira kubva kuna amai kuenda kumwana.
Tsvakiridzo iyi yakaitwa pamadzimai anosvika makumi matatu nemumwechete vaive pachipatara,” Chiremba De Luca vakatsinhira.
Kuneimweo tsvakirudzo yakaitwa muna Kurume, JAMA yakangayaonao kuti utachiona uhwu hunogona kutapukira kubva mubvuo kuenda kukacheche.
Tsvakiridzo inoenderera mberi
“Zvakadaro, tsvakurudzo iri kuenderera mberi, tirikutarisa ropa, mvura dzemunogara mwana mudumbu, bvuo, nezvese zvinebasa pakutakurwa nekuberekwa wemwana,” Chiremba ava vakatsinhira.
“Kuwana ruzivo urwu tiri mudambudziko, tiri mushishi hazvisi nyore, naizvozvo taingofungidzira tisina chokwadi chizere. Nhasi tavaneruzivo,” chiremba De Luca vakawedzera.
Mwana uyu akaberekwa neoparesheni, kuvhiyiwa. Zvinotakura utachiona zvese zvakawanikwa zvisina kuvhiringidzwa.
Guchi reSARS- iyo inodaidzwa kuti CoV-2, yatinodaidza kuti ÇOVID-19 rakawanikwa rakagukuchira utachiona muplacenta.
“Kubva muguchu iri utachiona hwakapinda mune rukuvhute kusvika kumwana,” Chiremba De Luca vakadaro.
“Mushure mezuva rimwe kacheche kakaoma mutezo, kuzvimba uropi uye kuchemesa zvinopisa tsitsi.
Kwapera mwedzi mitatu mai vaive vasina kana panorwadza.
“Izvi zvinogona kuitika asi nenguva dzirikure kure, pavana vese vaberekwa nana mai vane COVID-19, mwana mumwechete bedzi kubva muruzhinji urwu ndiye aive aonekwa aine utachiona uhu.
Madzimai akazvitakura anokurudzirwa kugeza maoko, nekusasvika paungano, kusunga masiki (mask) kana vachinge vari pane vamwe uye kuonekwa nana mukoti sezvinotarisirwa mudzimai akazvitakura.
Health News, HealthTimes Vernacular